Inqubomgomo Yobumfihlo Yewebhusayithi (CN)
Ngubani thina kunye nenjongo yalo mgaqo-mfihlo?
Lo mgaqo-mgaqo uchaza indlela iMH yoshishino ("MH", "thina" okanye "us") isebenzisa kwaye ikhusela ulwazi oluthile olusinika lona xa usebenzisa le website.
Ulwazi lomntu siqu lwazi olunokukuchonga wena njengomntu ophilayo, nokuba ngokwawo okanye xa kusetyenziswa ngokubambisana nolunye ulwazi esilubambe okanye esinokubamba. Lo mgaqo-mgaqo uchaze indlela esisebenzisa ngayo nokukhusela ulwazi oluthile esikuqokelela kuwe xa usebenzisa lewebhu.
Ukuba unemibuzo malunga nalo mgaqo-mgaqo okanye ukusetyenziswa kweenkcukacha zakho zobuqu sicela ucelwa nathi. Nceda uye kwicandelo "Indlela yokuqhagamshelana nathi" ngezantsi. Kulo candelo sichaza idilesi yeofisi yethu ebhalisiweyo, inombolo yethu yomnxeba kunye nekheli lethu le-imeyile.
Kuthekani ukuba awuhlali ujabule nalo mgaqo-nkqubo?
Ukuba awuvumelani nolwazi lwakho lomntu olusetyenziswayo ngokuhambelana nalo mgaqo-mgaqo-mfihlo kufuneka ubaleke ukusebenzisa le website ngokukhawuleza. Nceda uqaphele ukuba awuyi kukwazi ukuthenga izinto okanye iinkonzo ezivela kuthi kule website ngaphandle kokuba ungenise ulwazi oluthile oluthile kuthi ukuze ubhalise ukusebenzisa lewebhu kwaye ukuze sikwazi ukucwangcisa i-oda lakho.
Kuthiwani malunga nokuhlaziywa kule nkqubo yobumfihlo?
Sinokutshintsha le mgaqo-mgaqo-nkqubo we-ngasese ngokuhlaziya eli phepha. Kufuneka uhlaziye eli phepha rhoqo. Ukusetyenziswa kwakho kwesi siza emva kokuba utshintsho lwenziwe kulo mgaqo-mgaqo uza kubakho ukubonisa ukuba ufunde kwaye wamukela nayiphi na utshintsho. Akufanele usebenzise le website ukuba awuyiyo yonwabe nayiphi na utshintsho kule nkqubo yobumfihlo kwaye kufuneka usitshele ukuba ezo zinguqu zithetha ukuba awuhlali ujabule ngendlela esisebenzisa ngayo idatha yakho.
Ziziphi iinkcukacha zobuqu esiziqokelelayo?
Ukuba ungomnye wabathengi bethu (oku kuquka abathengi bamashishini kunye nabathengi) kwaye ukuba ubhalise ukusebenzisa iphepha elithile lewebhu lewebhu kubandakanya (umzekelo) ukuze uthenge iimpahla kunye neenkonzo ezivela kuthi, siya kukunika ukufikelela kula maphepha . Singaqokelela ulwazi oluvela kuwe njengenxalenye yale nkqubo yobhaliso; njengenxalenye yenkqubo yolawulo lwe-intanethi; kunye nokufumana imvume yakho yokuvumela ukuthengisa okuthe ngqo ukuba kuthunyelwe kuwe. Ulwazi oluthile esikuqokelela kuwe luquka:
igama lakho, umhla wokuzalwa kunye nolwazi lokunxibelelana (njengeposi ne-imeyile idilesi kunye neenombolo zomnxeba);
ulwazi malunga namava akho kunye neenkonzo zethu;
I-ID ye-MH yomsebenzisi (apho iiCoats izakukunika) kunye nephasiwedi (oya kuyibeka). Uya kucelwa ukuba unikeze i-ID yakho yomsebenzisi kunye nephasiwedi rhoqo xa ungena ngemvume ukusebenzisa lewebhu);
ukukhetha okuthe ngqo kumthengi kunye nokuvuma (nceda ubhekise kwicandelo "Ukuthengisa ngokuthe ngqo" ngezansi ukuze uthole ulwazi oluninzi);
iinkcukacha zekhadi lakho lekhredithi / yebhanki; kwaye
(ngokunxulumene nabathengi bezoshishino kuphela) iinkcukacha zeshishini lakho kunye nemisebenzi yalo, enokubandakanya ulwazi oluthile lomntu.
Olu luhlu aluphelelanga kwaye lungahlaziywa kwikamva. Kubonakaliswa kakuhle kweminye yolwazi lomntu esinokukuqokelela ngoku.
Yintoni esiyenzayo ngolwazi lomntu esiqokelelayo?
Siza kusebenzisa ulwazi lwakho lomntu kwiinjongo zoshishino ngokusemthethweni, umzekelo:
ukulawula le website kunye nesivumelwano sethu okanye olunye ulwalamano kunye nawe, kubandakanywa ukwenzela ukubonelela ngemveliso kunye neenkonzo zakho kuwe;
ukuhlalutya indlela osebenzisa ngayo le website ngeembono zokuphucula iimveliso kunye neenkonzo esizinikelayo kunye nemisebenzi yethu yokuthengisa kunye nentengiso kunye neenjongo zophando lweemarike eziphathelele ekuphuculeni okufanayo (sinokuqhagamshelana nathi ngokwale njongo okanye ucele abantu besithathu ukwenza njalo egameni lethu - nceda ubhekise kwicandelo "Ngubani na esiwabelana ngalo ngcaciso" ngezantsi);
ukujongana nokuphendula naluphina unxibelelwano, uphenyo okanye isicelo osihambisa kuso;
ukuthumela ukuthengisa ngokuthe ngqo ngeemveliso zethu kunye neenkonzo (kodwa kuphela xa unikezela imvume evumelekileyo ukuvumela le nto - nceda ubhekise kwicandelo "Ukuthengisa ngokuthe ngqo" ngezantsi); kwaye
ukuthobela imithetho yethu, yomthetho kunye nezinye izibophelelo zolawulo.
Olu luhlu aluphelelanga kwaye lungahlaziywa kwikamva. Kubonakaliswa ngokufanelekileyo kwezinye zeenjongo ezikhoyo apho singasebenzisa ulwazi lwakho oluqokelelwa kule website.
Ngubani olwabelana naye ngolwazi lwakho lomntu siqu?
Ngaphandle kwenkcazo engezantsi, asiyi kuthumela, ukuthengisa, ukuthengisa, ukusabalalisa okanye ukuqeshisa ulwazi lwakho lomntu kumntu wesithathu (lithetha nayiphi na umntu okanye inhlangano) ngaphandle kokuba sinemvume yakho okanye sivunyelwe ukuyiveza ngomthetho okanye kwinkqubo yomthetho.
Singathengisa ulwazi lwakho lomntu kumnye umntu okanye intlangano apho kuyimfuneko njengenxalenye yeenkqubo zethu zoshishino (umzekelo, kwimeko apho ulawulo okanye ulawulo lwethu luza kuthathwa yinkampani yangaphandle). Ngaba kufuneka senze oku siya kuqinisekisa ukuba kwenziwe ngokuhambelana noMthetho.
Singafunwa ngumthetho okanye inkqubo yomthetho ukukhulula ulwazi lwakho lomntu kumagunya omthetho (oko kukuthi inkundla, iinkundla, amapolisa okanye iinkonzo zokhuseleko). Ukuze ugcine ingqibelelo yale webhsayithi kwaye ukhusele iimfuno zabathengi kunye nababhalisi, siya kuthobela nayiphi na isicelo esinjalo. Ukongezelela, sinokufuneka ukuba sichaze ulwazi lwakho lomntu kumagunya karhulumente ngenkonzo okanye ezinye iinjongo. Kwezinye iimeko sinokugqiba ukuba kukho isizathu esicacileyo sokuba sichaze ulwazi lwakho lomntu kumagunya omthetho kwaye ukuba ukwaziswa kuya kulungiswa kwaye kusemthethweni phantsi koMthetho.
Ulwazi lwakho lomntu luyakwazi ukudluliselwa kwaye lusetshenziswe yiinkampani zonke kwiqela le-MH, ezinye zazo zingaphandle kweChina. Siza kudlulisela kuphela ulwazi lwakho lomntu kwizinye iinkampani ukuba zivumele ukuba zicubungulwe ukuze zinike iinkonzo kuthi.
Ukongezelela, kukho iimeko apho kuyimfuneko ukuba sikwazi ukuchazela ulwazi lwakho lomntu kwiinkampani zangaphandle okanye imibutho ukuze sikhusele amakhasimende ethu okanye iimfuno zethu ezisemthethweni. Ukuchazwa okunjalo kuya kuvunyelwa phantsi koMthetho kunikezelwa ukuba bekuyimfuneko ukukhusela loo mibalelo kwaye yayikuthwala ngokulinganayo engqondweni yakho.
Ingaba ulwazi lwakho luza kudluliselwa ngaphandle kweChina?
Idata esiyibuthayo ingasetyenzwa ngabasebenzi abangaphandle kweChina abasebenza kuthi okanye omnye wabathengi bethu. Abasebenzi abanjalo bangabandakanyeka, phakathi kwezinye izinto, bephethe idatha yakho, ukuzaliseka komyalelo, ukucwangciswa okanye iinkcukacha zakho zokuhlawula kunye nokubonelela ngeenkonzo zenkxaso. Ngokuthumela idatha yakho, uyavuma ukutshintshwa, ukugcina okanye ukucubungula. Siza kuthatha onke amanyathelo afunekayo ukuqinisekisa ukuba idatha yakho iyaphathwa ngokukhuselekileyo kwaye ngokuhambelana nale nkqubo yemfihlo.
Lapho sikunike khona (okanye apho ukhethe khona) iphasiwedi enokukunceda ukuba ufikelele kwiindawo ezithile ze-site yethu, unembopheleleko yokugcina eli gama liyimfihlo. Siyakucela ukuba ungabelani iphasiwedi nabani na.
Ngelishwa, ukuhanjiswa kolwazi nge-intanethi akukhuseli ngokupheleleyo. Nangona siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukhusela idatha yakho, asikwazi ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwedatha yakho idluliselwa kwisayithi lethu; naluphi na ukuhanjiswa kuyingozi yakho. Xa sesifumene ulwazi lwakho, siya kusebenzisa iinkqubo eziqinileyo kunye nezixhobo zokukhusela ukuzama ukukhusela ukungena ngemvume okungagunyaziswanga.
Kuthekani ukuba usebenzisa le website ngaphandle kweChina?
Ukuba usebenzisa le website ngaphandle kweChina, eminye imithetho ingafaka isicelo ekusebenziseni ulwazi lwakho lomntu. Sisebenzisa le website ukusuka ngaphakathi kweChina. Asikho phantsi kwemithetho yendawo yelizwe lakho kwaye lo mgaqo-nkqubo ungasithobeli loo mithetho. Akufanele uhambise ulwazi lwakho lomntu siqu ngaphandle kokuba unwabile kwesi sikhundla.
Kuthiwani ngolwazi olungachazwanga?
Singawasebenzisa kwaye sichaze ulwazi ngokubanzi (oko kukuthi abathengi ngabanye abanako ukuchongwa) ekuthengiseni kunye neenjongo zophuhliso lweqhinga. Le ngcaciso ayiyi kuba yinkcazelo yakho yobuntu kuba awuyi kuchongwa okanye uchongeke kuyo. Oku kuthetha ukuba lo mgaqo-mgaqo okanye umThetho awuyi kusebenza.
Sinokukhusela njani ulwazi lwakho lomntu siqu?
Ukuze ukhusele ukufikelela okungagunyazisiweyo okanye ukudalulwa, umonakalo okanye ukulahlekelwa kolwazi lwakho lomntu siqu, sithatha amanyathelo afanelekileyo emzimbeni nakwi-electronic, inhlangano kunye nezobugcisa ngoku, ngokuhambelana neembopheleleko zethu phantsi koMthetho. Oku kungabandakanya ukubethela (umzekelo, le website iyindawo ekhuselekileyo kwaye idluliselwe kuye kwaye kule ndawo iya kubhala).
Unembopheleleko yokugcina imfihlo ye-ID yakho yomsebenzisi kunye nephasiwedi ehambelana nokufikelela kwakho kumaphepha athile ale website kunye / okanye nayiphina i-akhawunti oyimisile nathi. Uyavuma ukwamukela uxanduva kuyo yonke imisebenzi eyenzeka ngokumalunga nokufanayo. Akufanele uvumele abanye abantu ukuba basebenzise i-ID yakho yomsebenzisi okanye iphasiwedi yakho. Nceda uqhagamshelane nathi ngokukhawuleza usebenzisa iinkcukacha kwicandelo elithi "Indlela yokuqhagamshelana nathi" ngezantsi xa ukholelwa ukuba i-ID yakho yomsebenzisi okanye iphasiwedi inokuthi ihlaselwe. Asiyi kuba nexanduva kuwe ukuba kukho ukungena ngemvume okungagunyazisiweyo kwiinkcukacha zakho zokungena ngemvume okanye umsebenzi ongagunyazisiweyo kule webhusayithi ngenxa yesigxina sakho sokungena kwi-website yakho, ukuba kungenjalo ngenxa yokunganakwa kwethu.
Naphezu kwemizamo yethu ngokuphathelele ukhuseleko kubalulekile ukukhumbula ukuba i-intanethi ayikho indlela ekhuselekileyo yokunxibelelana. Ulwazi lomntu siqu oluxhunywe kwi-intanethi lungathathwa ngabanye abantu. Asikwazi ukuqinisekisa ukukhutshwa kolwazi lomntu siqu oluthunyelwe kuthi kule website. Uyamkela ukuba usebenzisa lewebhu kwiingozi zakho.
Le webhsayithi ayijolise ukuba isebenziswe ngabantwana abangaphantsi kweminyaka yobudala be-13 kwaye ngoko sicela ukuba abantwana abangaphantsi kweminyaka yobudala be-13 bangenise ulwazi oluthile kwiziko lewebhu. Sincoma ukuba abazali nabagcini bakhumbuze abantwana babo ukuba baphathe idatha yabo ngokwabo ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo kwi-intanethi.
Le website iqulethe iinqununu nakwezinye iiwebhusayithi. Ukongeza, ezinye iiwebhusayithi ezingaphandle kolawulo lwethu zingadibanisa nale website. Asinabo uxanduva lokuzimela ngasese kunye nokuqulathwe kweziwebhusayithi. Kufuneka uqaphele kwaye ujonge kwi-statement yangasese echaphazelekayo kwiziko lemibuzo.
Ikhukhi kunye neeacon web
Singasebenzisa "ii-cookies" kwiwebhusayithi yethu. Ikhukhi ziifayile zedatha ezigcina ulwazi kwi-hard drive yakho okanye isiphequluli esithetha ukuba iwebhusayithi yethu inokuqonda ukuba uye wavakashela iwebhusayithi yethu ngaphambili. Benza kube lula kuwe ukugcina zakho iinketho kwiwebhusayithi, kwaye ngokubona indlela oyisebenzisa ngayo iwebhusayithi, sinokuyilungisa kwizinto ozikhethayo kwaye ulinganise ukusebenzisa kwakho.
Unako, ukuba ukhetha, khubaza ii-cookies kwisiphequluli sakho kwaye ususe zonke ii-cookies ezigcinwe kwikhompyutha yakho. Kwi-Microsoft Internet Explorer, oku kuya kwenziwa ngokukhetha 'Izixhobo / Iikhomputha zeInternet' kwaye ubuyekeze izicwangciso zakho zobumfihlo okanye ukhetha 'cima ikhukhi'.
Unokufumana indlela yokwenza oku kwi-browser yakho ngokuchofoza 'uncedo' kwimenyu yakho yomkhangeli. Nangona kunjalo, ezininzi iinkcukacha zethu zewebhu aziyi kusebenza xa ukhubaza ikhukhi.
Singasebenzisa kwakhona imifanekiso yecomputer ebizwa ngokuba yi "web beacons" kule webhusayithi kunye noonxibelelwano oluveliswe ekusebenziseni kunye / okanye ukubhalisa kule website, njengama-imeyli okupapasha. Iibhonononi zewebhu zidla ngokusebenzisana kunye ne cookies kwaye zisetyenziselwa iinjongo ezifanayo.
Sifake uluhlu olupheleleyo lweekhukhi ezisetyenziswe kwi-mh-chine.com ngezantsi, kunye nencazelo yintoni icookie isetyenziselwa yona. Iingubo aziyi kusebenzisa ii-cookie ukuqokelela ulwazi oluchongiweyo malunga nawe.
mh-chine.com isebenzisa i-Google Analytics, inkonzo ye-analytics yewebhu ehlinzekwa yi-Google, Inc. I-Google Analytics isebenzisa i-cookie ukwenzela ukuvavanya ukusebenzisa kwethu iwebhusayithi kunye nokuqokelela iingxelo kumsebenzi womsebenzisi.
I-Google igcina ulwazi oluqokelelwe yi-cookie kumaseva e-United States. I-Google ingaphinde idlulisele le nkcazelo kumaqela asithathu apho kufuneka ukuba wenze njalo ngomthetho, okanye apho abo bantu abathathu beqhuba ulwazi kwiGoogle. I-Google ayiyi kudibanisa idilesi yakho ye-IP kunye nayiphi na enye idatha egcinwe yiGoogle. Ngokusebenzisa mh-chine.com, uyavuma ukucwangciswa kwedatha ngawe nge-Google ngendlela kunye neenjongo ezichazwe ngasentla.
mh-chine.com isebenzisa inani labathengisi abaye bamisela ii-cookie kwiwebhusayithi yethu ngenxa yethu ukuze bahambise iinkonzo abanikezelayo. Uluhlu lwazo zonke iikhiki zenkampani ezisebenzisayo kwi-mh-chine.com kwaye yeyiphi na enye isetyenziselwayo ibonakala ngezantsi.
Ukuhlaziya nokufumana ukufikelela okanye ikopi yolwazi lwakho lomntu
Ukuba naluphi na ulwazi olunikezelayo luvela kumhla okanye aluchanekanga, nceda usazise ngokuqhagamshelana nathi nge-imeyile okanye ngeposi ngokusebenzisa iinkcukacha kwicandelo "Indlela yokuqhagamshelana nathi" ngezantsi.
Ukuba unqwenela ukufumana ukufikelela okanye ikopi yolwazi lomntu esilunayo malunga nceda sicela uqhagamshelane nathi ngendlela efanayo.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo
Ukuba ulwazi lwakho lomntu siqu lusetyenziselwa injongo yokuthengisa ngokuthe ngqo siya kucaca kumaphepha afanelekileyo ale website. Ngethuba elifanayo siya kufuna imvume yakho yokufumana ukuthengisa ngokuthe ngqo okanye siya kukuvumela ukuba ukhethe ukufumana oku (kuxhomekeke kwinto efunekayo phantsi kwemithetho efanelekileyo).
Ukuthengiswa ngokuthe ngqo kwithunyelwe ngefowuni okanye nge-imeyile, i-SMS, i-voicemail okanye nayiphina indlela yokwenza i-electronics esiza kukunika indlela elula yokunqaba ukuthengisa ngokuthe ngqo ngendlela efanelekileyo. Ukuba wenqaba ukuthengiswa kwekhompyutha, asiyi kuthintela ulwazi lwakho lomntu kwi-database yethu okanye ngokukhawuleza siyakwazi ukuba utshintshe ingqondo yakho. Oku kuthetha ukuba sinokuqhubeka nokubamba ulwazi lwakho lomntu (kuquka iinkcukacha zakho zoqhagamshelwano) kwifom egxininisiweyo, ukuze uqinisekise ukuba asiqhagamshelani nawe.
Ukuba nakwezinye izihlandlo unqwenela ukutshintsha ingqondo yakho ngokufumana ukuthengisa ngokuthe ngqo ungakhetha ukuphuma ngaphandle. Uyakwenza oku okanye ngokuhlaziya iinketho zakho kule website okanye ngokuqhagamshelana nathi nge-imeyile okanye uthumele usebenzisa iinkcukacha kwicandelo "Indlela yokuqhagamshelana nathi" ngezansi.
Ukupheliswa kweakhawunti yakho nokugcinwa kolwazi lwakho lomntu
Ngokuhambelana noMthetho siza kuqinisekisa ukuba ulwazi lwakho lomntu alugcinwa ixesha elide kunokuba luyimfuneko kwiinjongo (okanye) ezichaphazelekayo okanye kuthi nawaphi na amaqela asebenzayo egameni lethu.
Sigcina ilungelo lokuncedisa inkonzo okanye ukuphelisa i-akhawunti yakho ngaphandle kwezaziso zangaphambili.
Ukuba sigqiba i-akhawunti yakho okanye xa ukhansela i-akhawunti yakho, siya kuyivala ngokukhawuleza kwaye kuya kugcina ulwazi lwakho lomntu emva kokuba luyimfuneko xa kunzima nayiphi na imingeni yomthetho okanye ezinye iingxaki. Emva kwelo xesha ulwazi lwakho lomntu luya kukhutshwa okanye lususwe kwi-database (s).
UMthetho uninika ilungelo lokufikelela ulwazi olugcinwe ngawe. Ilungelo lakho lokufikelela linokusetyenziswa ngokuhambelana noMthetho. Nasiphi na isicelo sokufikelela singakhokelela kwimali ye-£ 10 ukuhlangabezana neendleko zethu ekunikezeni iinkcukacha zolwazi esinalo malunga nawe.